musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » IATA inodoma Chief Economist mutsva
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
IATA inodoma Chief Economist mutsva.
Marie Owens Thomsen achabatana neIATA seChief Economist yayo kutanga 4 Ndira 2022.
Owens Thomsen achabva kuBanque Lombard Odier, kwaakashanda seMusoro weGlobal Trends uye Sustainability.
Owens Thomsen ane PhD muInternational Economics kubva kuThe Graduate Institute kuGeneva uye MBA yakaenzana kubva kuYunivhesiti yeGothenburg muInternational Economics uye Bhizinesi.
Akabata nyika dzeUS, UK neSwitzerland, akashanda kuUK, France neSwitzerland uye achitsetsenura chiSwedish, Chirungu neFrench.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) yakazivisa kuti Marie Owens Thomsen achabatana neSangano seChief Economist yayo inoshanda 4 Ndira 2022.
Owens Thomsen achauya achibva kuBanque Lombard Odier, kwaakashanda seMusoro weGlobal Trends uye Sustainability kubvira 2020. Pamberi pazvo akanga ari kwenguva refu Global Head of Investment Intelligence (2011-2020) kuIndosuez Wealth Management. Pamusoro pezvo, akashanda muChief Economist uye mamwe mabasa anoenderana naMerrill Lynch, Dresdner Kleinwort Benson uye HSBC. Basa rake rakasiyana-siyana rinosanganisira bhizimusi uye mabasa ekusimudzira musika.
"Basa raMarie pazvinhu zvehupfumi zvakanyanya nekutarisa kusimba kunomugadzirira kugadzirisa nyaya dzepamusoro-soro - kupora kubva kuCOVID-19 uye kusimba. Kuuya kubva kunze kwechikamu chendege, achaunza hutsva hutsva hwakakosha uye maonero. Uye ndine chivimbo chekuti achaenderera mberi nemukurumbira weIATA wekutaura zvine chinangwa uye ongororo iyo yakakosha pakutsanangura kubatsira kwendege kuhupfumi hwenyika pamwe nekukurudzira kuti mapurisa endege abudirire,” akadaro. Willie Walsh, Director General weIATA.
“Ndiri kujoina Iată kubatsira chikamu chezvendege icho chave chiri mutyairi wenguva refu wekusimudzira hupfumi. Ndichaita izvi nenzira yekutsvagisa inozivisa zvinhu zvinokonzeresa zvezvinhu zvakakosha uye mhinduro dzadzo dzekutanga. Izvi zvakakosha sezvo ndege inotanga kupora kubva kuCCIDID-19 uye inoenderera mberi nerwendo rwekuenda kune zero emissions. Ndinotarisira ramangwana iro kubhururuka kwendege kunogona kubudirira mukati mehupfumi hwenyika hwakasimba,” akadaro Owens Thomsen.
Owens Thomsen ane PhD muInternational Economics kubva kuThe Graduate Institute kuGeneva uye MBA yakaenzana kubva kuYunivhesiti yeGothenburg muInternational Economics uye Bhizinesi. Akabata nyika dzeUS, UK neSwiss, akashanda kuUK, France neSwitzerland uye achigona kutaura chiSwedish, Chirungu neFrench.
Owens Thomsen anotsiva Brian Pearce uyo akasiya basa kuIATA kutanga kwegore rino mushure mekushanda saChief Economist kubva muna 2004.